အာလုံးအတွက် usb softwares - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
အာလုံးအတွက် usb softwares
ရလာဒ်များကိုကြည့်မည်: only only vite
good 91 97.85%
bad33.23%
USB နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ဆောဖ်ဝဲများကို
ပြန်မျှလိုက်ပါတယ်။ USB နဲ့ပတ်သတ် တဲ့ ဆောဖ်ဝဲများနေရာတစ်ခုတည်ရှိစေချင်းတာကြောင့်ပါ တစ်စုံတစ်ယောက်အတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့ မျှော့်လင့်ပါတယ်
တစ်ခုစီရဲ့အကြောင်းအအရာကိုတော့ကျွန်တော်မဆွေးနွေးတော့ဘူး နာမည်ကြည့် ယုံနဲ့ သိနိုင်လောက်ပါတယ်
usb safely remove 432
Last edited by tu tu; 02-04-2011 at 05:21 AM.. Reason: remove USBThief
အောက်ပါအသင်းဝင် 50 ဦးတို့မှ thureinsoe အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုကိုသီဟ, ကိုသီလ, ချစ်သမီး, ခွန်ညီး, ဆိုင်ကျောက်, ဆွမ်းပေါင်, ဒဿဂီရိ, နိုင်လင်းစိုး, နီထွန်းဦး, ဘဘကြီး, ဘုန်မောင်, မျိုးဟန်ထက်, လမ်းပြကြယ်, သက်တန့်, သက်နိုင်, သန့်ဇင်ဌေး, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, အမြင့်ပျံလင်းယုန်, နေမင်းမောင်, မေမင်းဆက်(ပုသိမ်မြေ), မေဦးမွန်, မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, အောင်ဗလ, အေးဝတ်မှုန်, ဝေမင်းခေါင်, ငြိမ်းချမ်း, ဖြိုးခန့်, နိုးတူး, amaung344, aozora, aungphyo, bagothar85, blackNwhite, bonge, kingofvirus, ko lin, kokomyomin, kyawtoe, KznT, Lwin Thu, minthumon, phoetharlay, PyaitSone, someone22, Win Naing Tun, Wynn, yemin7, zin min aung, zo
ပြန်စာ - အာလုံးအတွက် usb softwares
အကိုရေ ဒီနှစ်ခုဖြည်စွတ် ပြီးတင်ပေးလိုတ်ပါတယ်
အောက်ပါအသင်းဝင် 40 ဦးတို့မှ မျိုးဟန်ထက် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုကိုသီဟ, ကိုသီလ, ခွန်ညီး, နိုင်လင်းစိုး, နီထွန်းဦး, ဘဘကြီး, သက်နိုင်, သန့်ဇင်ဌေး, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, ခေါက်ရောင်းသား, နေမင်းမောင်, မေဦးမွန်, မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, အောင်ဗလ, အောင်မင်းကို, ငြိမ်းချမ်း, ဖြိုးခန့်, နိုးတူး, amaung344, aungphyo, AZM, bagothar85, blackNwhite, bonge, dodobom, kingofvirus, kokomyomin, KznT, Lwin Thu, minthike, minthumon, phoetharlay, PyaitSone, thureinsoe, tu tu, Win Naing Tun, yemin7, zin min aung, zo
ပို့စ် 13 ခုအတွက် 51 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် .... ဒါပေမယ့် .. software ၁ ခု ချင်းဆီကို ဘယ်လို တွေအလုပ်လုပ်တယ် .. ဘာတွေ အားသာတယ် .. ဘယ်ဟာတွေ သိပ်မကြိုက်တာပါပြောပြပေးရင် ပိုကောင်းမယ်ထင်ပါတယ် ...
အောက်ပါအသင်းဝင်9ဦးတို့မှ okkarz အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုသီလ, တင်ဆန်း, ဓာတုကလျာ, မောင်သံသရာ, အောင်ဗလ, အောင်မင်းကို, နိုးတူး, Win Naing Tun, zo
Visit okkarz's homepage!
Find More Posts by okkarz
software ၁ ခုချင်းစီ အားနဲချက် အားသာချက်တွေ ကိုရှင်ပြပေးစေချင်ပါတယ်
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ ဗိုလ်ဗိုလ်အောင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဓာတုကလျာ, နီထွန်းဦး, မောင်သံသရာ, အောင်မင်းကို, နိုးတူး, zo
Find More Posts by ဗိုလ်ဗိုလ်အောင်
သူကတော့ Usb stick,external hard disk ,micro sd card တွေကနေ၀င်တဲ virus အကာအကွယ် အနေနဲ့ အသုံးပြုတာပါ။atorun
file ကိုလဲ block လုပ်ပေးပါတယ်။ ဗိုင်းရစ် ပါလာရင်လည်း သူကပြပါတယ်။သတိထားပြီးသုံးလိုရတာပေါ့။
USB Shield Tag သူကတော့ usb device မှာ virus ပါလာပြီးဆိုရင်ပြပါတယ်။ဒါဆိုရင် select ပေးပြီးdeletနဲဖြတ်လိုရပါတယ်။
Usb scan tag က usb device တွေကို scan ဖတ်လိုရပါတယ်။ တွေရင် delet ပေါ့။***သတိပြုပါ virus တကယ်မသေပါ**
ီData protection tag က USB Access Control ဆိ်ိုတာက ကိုယ်ဆီက data တွေ usb ကနေယူသွားလိုမရအောင်password ပေးထားလိုရပါတယ် usb drive သည်drive ထဲကအလုပ်လုပ်နေတာကိုရပ်ပစ်တာပါ။
System tool disk cleanup သန်ရှင်းရေးလုပ်တာပါ Temp ,Recent,Cookies အဲ့ဖိုင်တွေကိုဖျက်ပေးပါတယ်။
Repair system က Virus ကြောင် system file တွေပျက်ခဲရင် System restore ပြန်လုပ်လိုရပါတယ်။
Autostart list သည် စက်စဖွင်ကတည်က Run နေတဲ့ program တွေကိုပြပေးပါတယ်။ဖိုင်ပတ်လမ်းတွေပါပြပေးထားတာ virus
Quarantine tag မှားပီး delete လုပ်မိတာမျိူးဆိုရင် restore ပြန်လုပ်လိုရပါတယ်။
တိတိကျကျလေးဖတ်ချင်ရင် ဒီမှာ သွားဖတ်လိုတ်ပါ။
Last edited by မျိုးဟန်ထက်; 26-05-2011 at 06:52 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 22 ဦးတို့မှ မျိုးဟန်ထက် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
နီထွန်းဦး, ပုထုဇဉ်, သန့်ဇင်ဌေး, ဦးသာကြီး, နေမင်းမောင်, မေမင်းဆက်(ပုသိမ်မြေ), မောင်သံသရာ, အောင်ဗလ, aungphyo, bagothar85, blackNwhite, bonge, comic_, g00gle, kokomyomin, Lwin Thu, phoetharlay, thureinsoe, Win Naing Tun, Ye Aung, yemin7, zo
ကျနော့် usb stick တစ်ခု format ချမရတော့လို့
usb stick ကို format ချတဲ့ software လေးများ မရှိဘူးလား ခင်ဗျ...
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ ကောင်ပေါက်စ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မေမင်းဆက်(ပုသိမ်မြေ), အောင်မင်းကို, p8yohtet, zo
Soft လေးကို ရမ်းလိုက်ပါ၊ ပြီးရင် Stick ထိုးလိုက်ပါ၊ Device , file system and volume label မှာ Stick နဲပတ်သက်တာတွေ ပေါ်ရင် Format ချလို့ရပါပြီ၊ အဆင်ပြေပါစေ ခင်ဗျာ...။
ထင်မြင်ချက်များ ဆွေးနွေးခြင်းများ ကြိူဆိုပါတယ် ခင်ဗျာ…။
လူတွေရဲ့အတတ်အသိပညာ ဆိုတာတကယ်တော့ အာရုံ သိလေး သက်သက်မျှသာ ဖြစ်ပြီး၊ အတွေးအခေါ်ပညာတွေအပေါ် မာန်မာန၊မစ္ဆရိယ စေတသိတ်တွေနဲ့ တန်ဆာဆင်လိုက်ရင်တော့ သတိတရားကင်းမဲ့တဲ့ အပြုအမူ၊ တကဲ့စစ်မှန်သောတတ် သိပညာရှင်တို့ရဲ့အမူအကျင့်နဲ့ဆန့်ကျင် ပြီးသားလို့မှတ်ယူမိပါတယ်။
Last edited by နေမင်းမောင်; 28-05-2011 at 05:27 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 30 ဦးတို့မှ နေမင်းမောင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဆိုင်ကျောက်, နီထွန်းဦး, ပုထုဇဉ်, မျိုးဟန်ထက်, သန့်ဇင်ဌေး, ဦးသာကြီး, ကောင်ပေါက်စ, မေမင်းဆက်(ပုသိမ်မြေ), မောင်သံသရာ, အောင်ဗလ, အောင်မင်းကို, ပြာဂလောင်, နိုးတူး, bagothar85, bonge, comic_, g00gle, HtutKhaung, koaungkyaw7, kokomyomin, KznT, Lwin Thu, minthike, minthumon, pannuko, phoetharlay, PyaitSone, thureinsoe, Win Naing Tun, zo
ဒါလေးကတော့ USB ကို အန်တီဗိုက်ရပ်စစ်တဲ့အကောင်လေးပါပဲ
8 Antivirus for USB Flash Drives | 73MB
By means of the given set of antiviruses scanners you can check up your system on presence of viruses. All programs work without installation, from any replaceable carrier. The given set covers all spectrum of virus dangers.
1. Ad Aware SE.
2. Avira Antivir.
4. McAfee Virus Scan.
7. Trend Micro Sys Clean.
8. Dr.Web Scanner for Windows.
Run PStart.exe when using.
To Download : ifile
ကျွန်တော့်မှာနောက်ထပ်ကျန်နေတာလေးတွေရှိသေးတယ်ဗျ အပေါ်က ဆော့ဝဲတွေနဲ့မတူတာလေးတွေ နောက်ကျဆက်တင်ပေးမယ်... အားလုံးအဆင်ပြေပါစေ.....
Credit ကိစ္စကတော့ ကျွန်တော် နိုင်ငံခြားဆိုဒ်ကလား ဒီမိသားစုဖိုရမ်ကလားဆိုတာ တကယ်ပဲမေ့နေလို့ပါ.. ပိုင်ရှင်ရှိတယ်ဆိုရင်ပြောပါ အပြည့်အစုံ Credit ပြန်ပေးပါ့မယ်..
ဆိုင်ကျောက်, နီထွန်းဦး, မျိုးဟန်ထက်, သက်တန့်, နေမင်းမောင်, မောင်သံသရာ, အောင်ဗလ, နိုးတူး, aungphyo, bagothar85, g00gle, KznT, Lwin Thu, minthumon, pannuko, thureinsoe, zo
နာမည်ကို ကြည့်လိုက်တာနဲ့ ဘာအတွက် သုံးတယ်ဆိုတာ သိကြပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ... သူကတော့ ကျွန်တော်တို့ ကွန်ပျူတာတွေက ကိုယ့်ရဲ့ DATA တွေကို တခြားသူတွေရယူခြင်းမှ ကာကွယ်ဖို့အတွက် အတွက်ပါခင်ဗျာ.. usb တင်မကပါဘူး CD , DVD drive တွေ ၊ Network ချိတ်ထားတဲ့ ကွန်ပျူတာ.. စတာတွေကိုပါ ပိတ်ထားလို့ ရပါတယ်ခင်ဗျာ.. Password သိတဲ့ သူသာလျှင် အသုံးပြုလို့ရအောင် လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်... အသေးစိတ်သိလိုလျှင်တော့ ဒီနေရာမှာ သွားဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ... အဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာ...
USB Block 1.3.0 + Crack
Password >>> WWW.Myanmarfamily.Org
Last edited by bagothar85; 27-10-2011 at 08:50 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 22 ဦးတို့မှ bagothar85 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုသီလ, ညီညီဇော်, နီထွန်းဦး, မျိုးဟန်ထက်, ဝင်းအောင်, သက်တန့်, သန့်ဇင်ဌေး, နေမင်းမောင်, ဗေဒါလေး, မောင်သံသရာ, နိုးတူး, aungphyo, g00gle, KznT, Lwin Thu, minthike, pannuko, phoetharlay, PyaitSone, someone22, thureinsoe, zo
ဒီအပိုင်းလေးမှာ ၀င်ရေးမလို့ လုပ်နေတာကြာပါပီ။ မရေးဖြစ်တာနဲ့ ဘဲ့ ခဏတခြားဘက်ကိုလှည့်နေလိုက်တာပါ။ အခု အပေါ်မှာ ကိုသူရိန်စိုးနဲ့ ညီလေး မျိုးဟန်ထက်တို့ ပေးထားတဲ့ USB Software တွေက တကယ်ကို ပြည့်စုံသလောက် ဖြစ်နေပါပီ။ ကျွန်တော်က နည်းနည်းလေး ထပ်ဖြည့်ပေးယုံပါပဲ့။ တနေရာတည်းမှာ အကုန် ရအောင်လို့ပါ။
ဒီ tool ကို သုံးပီး Image (ISO)တို့ ကို Create လုပ်လို့ ရမယ် MP3Player လို Mount လုပ်ပီး USB drive ကို သုံးလို့ ရမယ် .Backup လုပ်လို့ ရမယ် . restore . လုပ်လို့ ရပါမယ်။ သူကိုအသုံးပြုဖို့အတွက် .netframework 4.0 လိုပါလိမ့်မယ်။
Photo from ….http://www.alexpage.de/
ကျွန်တော် ဒီ tools လေးကိုတော့ မရှင်းပြတော့ပါဘူး ပုံလေးကိုကြည့်လိုက်ရင် ဘာတွေ လုပ်လို့ ရမယ်ဆိုတာ သိမှာ ဖြစ်သလို ခေါင်းစဉ်မှာကိုက အကုန်ပါနေပီးသားပါ။ သူမှာတော့ feature အနေနဲ့ Backup လုပ်ထားတဲ့ Data တွေကို တခါတည်းတန်းပီး image ရိုက်လို့ ရပါတယ်။
photo from ….http://www.pendriveapps.com/
သူအကြောင်းကို ဒီGoogle site တခုမှာ အပြည့်အစုံ ဖော်ပြပေးထားသလိုtips and trick တွေကိုပါ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ freeware ဖြစ်တဲ့ အတွက် ဒေါင်းလုပ်လင့်ကို ဒီနေရာမှာ သွားပီး ကြိုက်တဲ့နေရာကနေ ဒေါင်းယူနိင်ပါတယ်။Google site မှာ ရေးထားတာ မပြည့်စုံဘူးထင်ရင် ဒီဖိုရမ်မှာ အသေးစိတ်ရေးထားတာ ရှိပါတယ်။ အသုံးပြုပုံ အသေးစိတ်ကိုတော့ ဒီနေရာမှာ screenshot တွေနဲ့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
Photo from … http://dottech.org/
သူမှာတော့ လုပ်ဆောင်လို့ ရတာတွေ အများကြီးပဲ့။ ရှင်းပြမနေတော့ပါဘူး။ လုပ်ဆောင်ရေတွေ ကို ဒီလင့်မှာ အသောချာဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ video tutorial တွေကိုပါ တွဲဆက်ကြည့်နိင်သလို လုပ်ဆောင်မူ အဆင့်ဆင့် လိုက်ကိုလည်း ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ လင့်တွေကို ပဲ့ ပြန်ညွှန်းပေးလိုက်တာ English လို စာတွေကိုပါ ဖတ်စေချင်လို့ပါ။ သူ့ကို ဒေါင်းဖို့တွက်တော့ ဒီလင့်မှာ သွားယူနိင်ပါတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင် 18 ဦးတို့မှ သန့်ဇင်ဌေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုသီလ, နီထွန်းဦး, မျိုးဟန်ထက်, နေမင်းမောင်, မောင်သံသရာ, အောင်ဗလ, aungphyo, bagothar85, g00gle, kokomyomin, Lwin Thu, p8yohtet, pannuko, phoetharlay, phyomyintthein, PyaitSone, thureinsoe, zo
Flash drive ထဲမှာအလွယ်တကူ အသုံးပြုနိုင်မဲ့ application
အောက်ပါအသင်းဝင် 13 ဦးတို့မှ နီထွန်းဦး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုသီလ, ဆိုင်ကျောက်, မျိုးဟန်ထက်, သန့်ဇင်ဌေး, နေမင်းမောင်, မောင်သံသရာ, aungphyo, bonge, g00gle, Lwin Thu, p8yohtet, thureinsoe, zo
မသူသူရေ bad ဖြစ်ရမှာလေ typo errorဖြစ်တာထင်တယ်ခင်ဗျ
မသူသူရဲ့ အားထုတ်မှုတွေကို အားကျ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ
အောက်ပါအသင်းဝင် 11 ဦးတို့မှ Lwin Thu အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
နီထွန်းဦး, မေမင်းဆက်(ပုသိမ်မြေ), မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, မြန်အောင်သား, minthike, p8yohtet, pannuko, phoetharlay, thureinsoe, zo
အကြိုက်ဆုံး, usb list
System Maintenance Softwares ko myo Applications 43 29-09-2011 05:04 PM
Why not use open source softwares? Bayint Naung Linux များ (သို့) Linux နှင့်ဆိုင်ရာများ409-07-2011 08:37 AM
SOFTWARES Pack 2009 ကျန်စစ် Applications001-07-2009 08:47 AM
Ares P2P Softwares ဂျစ်တူး Applications018-05-2008 02:16 AM